Imefusị ihe oriri chọrọ nlebara anya dị ukwuu na njem na njem nleta na-efe efe
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » culinary » Imefusị ihe oriri chọrọ nlebara anya dị ukwuu na njem na njem nleta na-efe efe
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • culinary • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • News • Iwughachi • Resorts • Ịrụ ọrụ • Tourism • Okwu Nlegharị Anya • Ihe nzuzo Njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
Ọganihu a na mmata gburugburu nri nri ga-eme ka nrụgide na ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ njem na njem
Mbelata ma ọ bụ imegharị ihe mkpofu nri bụ ihe dị mkpa n'ihi ọrịa na-efe efe COVID-19
Ebumnuche ndị dị ugbu a iji luso mgbu nri site na njem erughị
Iwepu nri kọfị buru ibu na họtel ga-aga ogologo oge iji kpochapụ nri nri
Ihe kariri ọkara nke ndị na-aza ajụjụ na nyocha ọhụụ banyere ụlọ ọrụ ọhụrụ ekwuola na mbenata ma ọ bụ imegharị ihe mkpofu nri bụ ihe kachasị ha mkpa n'ihi ọrịa COVID-19. Ọganihu a na mmata gburugburu nri nri ga-eme ka nrụgide na ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ na mpaghara njem na njem.
N'ihe banyere atumatu gburugburu ebe obibi, enwere ọtụtụ atumatu iji lebara mgbanwe ihu igwe na ibelata akara ụkwụ carbon, mana otu nlebara anya anaghị enye nsogbu na-arịwanye elu nke nri nri. Nke a na - abawanye mmefu ọrụ maka ụlọ nkwari akụ ma belata nzere akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ.
Ebumnuche ndị dị ugbu a iji lụsoo mmebi nri site na njem erughị ezu - ọkachasị mgbe ị na-elele ụlọ ọrụ ebe obibi. Dịka otu n'ime ọtụtụ ihe atụ, Hilton ekwela nkwa ibelata nri nri site na 50%, mana ọ bụghị rue 2030, nke bụ oge dị ogologo.
na Covid-19 na-akụghasị ọnụego obibi maka ọtụtụ ndị egwuregwu bọọlụ n'ụlọ ọrụ ebe obibi, ebumnuche gburugburu ga-agabiga ma weta n'ihu. Iwepụ nri kọmị buru ibu na họtel, dịka ọmụmaatụ, ga-aga ogologo oge iji kpochapụ nri nri kpamkpam. Agbanyeghị, na ụlọ ọrụ na - ekewa ekewa karịa, a na - emepụta ihe ịma aka ndị ọzọ na - akpata nri nri. Dịka ọmụmaatụ, mmalite nke akụ na ụba nkekọrịta na ụlọ obibi na-etinye ọrụ dị ukwuu n'ubu ndị ọbịa mgbe a bịara n'ihe oriri. Enweghi ike ichikota mmiri n'ime ulo ndi mmadu dika o nwere ike ibu na nkwari akụ, n'ihi na o gha emetuta ahuhu ndi ozo.